ပါးလွှာသောခြေထောက်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း - ခြေလှမ်းများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်ပိုမိုသော | Bezzia
Susana godoy | 10/06/2021 14:00 | လေ့ကျင့်
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကဘာလဲဆိုတာသင်သိချင်ပါသလား။ ယနေ့သင်သည်သံသယများစွာကိုစွန့်ခွာသွားမည် ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်များစွာသောလူများစွာတောင်းဆိုသောထိုရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏သတ်မှတ်ထားသောareaရိယာကိုလျှော့ချရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ၊ ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျင်မြန်စွာစိတ်ပျက်အားငယ်လေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အခြေခံလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အခြားသတ်သတ်မှတ်မှတ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဤအရာအားလုံးကိုကျန်းမာသောအစားအစာဖြင့်ဝန်းရံထားသည် ဘယ်မှာလဲ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသမျှကိုအောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်အနည်းငယ်သည်းခံခြင်းနှင့်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုရှိရမည်။ ငါတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်စတင်တိုက်ခိုက်နေတာလား။
4 ပါးလွှာသောခြေထောက်များနှင့် cellulite ကိုဖယ်ရှားရန်လေ့ကျင့်ခန်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုလိုချင်သော်လည်းခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်နေရာ၌မဆိုလျင်မြန်စွာအဆီမဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လမ်းကြောင်းအချို့ကိုအနည်းငယ်တိုတောင်းနိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ပထမတစ်ခုကကျန်းမာသောအစားအစာသို့မဟုတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့စဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ဗိုက်ဆာနေစရာမလိုဘူး ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပရိုတိန်းများကိုပိုမိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များကိုထိန်းသိမ်းသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများနှင့်ကြော်သောအစားအစာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝမှခဏဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အစားအစာနှင့်အတူပြီးစီးသောလေ့ကျင့်ခန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ခုန်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည် ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်စည်းကမ်းလုပ်နေတာ။ ဘာတွေလဲ ကောင်းပြီ, အလယ်အလတ်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်လမ်းလျှောက်သွား, စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ချည်ငင်လေ့ကျင့်ပါ နှင့်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်တက်ခြင်းလှေကားထစ်များလည်းထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မှတ်။ နှလုံးခုန်နှုန်းသည်ပထမမိနစ်မှ စ၍ နှလုံးရောဂါရှိသည့်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အဆီကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ မတိုင်မီ၊ စဉ်နှင့်ပြီးနောက်နှစ် ဦး စလုံးသည်များစွာသောရေသို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုသောက်သုံးရန်နှင့်သကြားဓာတ်အချိုရည်များကိုမစွန့်ပစ်ရန်သတိရပါ။ သင်လိုချင်သောရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းများပြီးသားပါပြီ!
ခြေထောက်များ (သို့) ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားနေရာများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကတော့ငါတို့တကယ်စားသင့်တယ်၊။ မှန်ပါသည်၊ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာသောအစားအစာကို အခြေခံ၍ လူနေမှုပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကကျွန်ုပ်တို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်စောလျင်စွာပန်းတိုင်သို့ရောက်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ပြုတ်ထားသည့်အစားအစာများ၊ ကြော်ထားသောကြော်များနှင့် pastries အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်စကား (သို့) နှုတ်ဆက်ရပါမည်.
အလားတူပင် sugary ကာဗွန်နိတ်အချိုရည်သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးထားသောဖျော်ရည်များလည်းအလားတူပင်။
ငါတို့တွေကအဖုအပိမ့်တွေဒါမှမဟုတ်ကော်ဖီတွေပိုသောက်မယ်၊ သကြားမပါတဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့သောက်မယ်။
အသားတွေကတော့တစ်ပတ်မှာအကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်သင်ကြိုက်တာရှိတာမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အချိန်အများစုမှာ ကြက်သားသို့မဟုတ်ကြက်ဆင်ကဲ့သို့အဖြူရောင်အသားများကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒီပရိုတင်းတွေအားလုံးကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ရမယ်။ တကယ်တော့ဒီဟာမင်းပြားရဲ့ထက်ဝက်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဝက်တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ပရိုတိန်းနှင့်အခြားတစ်ခုသည်ဂျုံပေါင်မုန့်သို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲကဲ့သို့သောဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏ခြေထောက်များကိုပါးလွှာစေရန်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကဘာလဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းသရဲခြောက်နေသောမေးခွန်းဖြစ်ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့အဖြေရပြီဖြစ်သည် သို့သော်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတော်များများကိုတွေ့ရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်အမှန်တကယ်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌စမ်းသပ်လိမ့်မည်။
ဘယ်အချိန်မှာမစတင်မီ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နောက်ဆက်တွဲဒဏ်ရာများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုသည်။ ပါးလွှာသောခြေထောက်များအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရာတွင်ပထမနေရာတွင်ထိုင်။ ထိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့အလေးချိန်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ, ဗားရှင်းအများအပြားရှိသည်, sumo, isometricစသည်တို့ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤလောကသို့ပို့ဆောင်ပေးသောအရာများကိုကိုင်တွယ်ရန်မှာပြီးပြည့်စုံသောအရာမဟုတ်ပါဟုပြောရပါမည်။ ထို့အပြင်သင်၏လေ့ကျင့်မှုကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများဖြင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ rep block တစ်ခုချင်းစီအကြားစက္ကန့် ၂၀ ခန့်အနားယူရန်သတိရပါ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီခြေလှမ်းတွေကကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်သာမကခြေထောက်တစ်ချောင်းလုံးကိုပါအသံထွက်စေတယ်။ ဒါ့အပြင်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေမှာလည်းရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ သင်သူတို့အကြားသေးငယ်တဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူမတ်တပ်ရပ်သည်နှင့်အခြားတစ် ဦး ကွေးနေတုန်းပဲနေတုန်း, သင်၏ခြေထောက်တစ် ဦး နှင့်အတူခြေလှမ်းပြန်ယူပါ။ ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကဒူးကိုမဖြတ်သင့်ဘူးဆိုတာသတိရပါ။ အဆုတ်များသည်ခုန်ခြင်း၊ ဘေးတိုက်ခြင်း၊ ရှေ့သို့ကန်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်သို့တက်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ဖန်ထပ်မံရွေးချယ်သောအရာသည်။ သင်တစ် ဦး ကီထိုင်ပေါင်းစပ်နှင့်ကထဲကတစ် ဦး lunge ယူနိုင်ပါတယ်။
ခြေလှမ်းတစ်ခု၊ ခုံတန်းရှည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်တစ်ခုသည်ဤသို့သောလေ့ကျင့်ခန်း၏အခြေခံများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါတို့ခြေထောက်တွေကိုပိုပြီးလှုပ်ရှားခွင့်ပေးပြီးအဲဒါကိုအများကြီးလိုအပ်တယ်။ ထို့အပြင် ဤကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းတွင်တင်ပါးများ၊။ ငါတို့ခြေလှမ်းမရောက်မှီငါတို့ရပ်နေကြသည်။ သို့သော်သင်ကခုံတန်းရှည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အံဆွဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်လျှင်ဒူးထက်မပိုသင့်ပါ။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြင့်ခြေထောက်တစ်ချောင်းဖြင့်ခြေထောက်တစ်ချောင်းချလိုက်သည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုမချရန်အမြဲကြိုးစားပါ၊ သို့သော်ကျောကိုဖြောင့်အောင် ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေထောက်များကိုတွန်းအားပေးသည်။ ခြေထောက်များကိုပိုမိုမျှတအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းတွင်လည်းပါဝင်သင့်သည်။ မင်းထိုင်ပြီးစကစ်စတာနှစ်ခုစလုံးကိုစနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်၏လက်များကိုမြေပေါ်သို့တင်လိုက်လျှင်သင်သည်သေးငယ်သည့်တွန်းအားတစ်ခုဖြင့်သင်၏ခြေကိုပြန်ပစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ထ။ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်မြေသို့ပြန်သွားရန်ခြေထောက်ပေါ်ခုန်ပါလိမ့်မည်။ သွက်လက်သောနည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါက၎င်းသည်နှလုံးပြိုင်ပွဲကိုများစွာဖြစ်စေသောကြောင့်ရလဒ်ကောင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်အမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြင်းထန်မှုနှင့်အားထုတ်မှုကိုချိန်ညှိသင့်ပါတယ်။
ပါးလွှာသောခြေထောက်များနှင့် cellulite ကိုဖယ်ရှားရန်လေ့ကျင့်ခန်း
ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိုးရိမ်သောနောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာ cellulite ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိသောထိုအတားအဆီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှများစွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အကြံပြုချက်များအားလုံးအပြင်အချို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုထည့်သွင်းထားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အစားအစာအပိုင်းမှာမှန်ပါသည် အသီးများလည်းတွေ့ရသည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတော်ဘယ်ရီ၊ ဖရဲသီးနှင့်ငှက်ပျောသီးတို့ကို ပို၍ လောင်းကြလိမ့်မည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ antioxidants တွေရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းတဲ့ cellulite စုဆောင်းထားတဲ့အခြေခံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရည်တွေများများမသိမ်းနိုင်အောင်တားဆီးပေးတယ်။
ခြေထောက်ပါးလွှာပြီး cellulite ကိုဖယ်ရှားပေးသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားအင်အနည်းငယ်လိုအပ်သောသူများနှင့်ကျန်နေသည်။ ၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာသည် elastic band ပေါ်တွင်လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်သောအပိုင်းတစ်ခုစီကိုသေချာသောအသံဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာတကယ်လိုအပ်တယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်နိုင်သောအဆုတ်နှင့်ကီထိုင်နှစ်ခုစလုံးကိုမမေ့ပါနှင့်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်ကူညီနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ လှေကားထစ်များနှင့်အတူတူပင်၊ သင်သည်သင်၏ခြေဆစ်များကိုလည်းလေးလံစေနိုင်သည်။ ဤသည် sagging ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကူညီခြင်းနှင့်စောစောစီးစီးသင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်အရှုပ်သင့်ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုပြသနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြရန်ကျန်ရှိနေသေးသောလှည့်ကွက်များထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည် သင်သည်သင်၏ပရိုတိန်းစားသုံးမှုတိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းအပြင်ကြွက်သားထုကိုတိုးစေတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်နံနက်အချိန်၌ကော်ဖီမသောက်နိုင်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်တင့်မျှတစွာသောက်ပါ။ သို့သော်ယင်းကိုမမေ့ပါနှင့်။ ထို့အပြင်အစဉ်မပြတ်အဆီပါသောနို့နှင့်သင်လိုက်ပါနိုင်သည်။ သင်သောက်ပြီးသောဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်စေသောအရက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ သင်ထင်ထားသည့်အတိုင်းဆားကိုတစ်ဖက်သို့လျှော့ချလိုက်သည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ အူရဂန်ဂိုသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာစသည့်အမွှေးအကြိုင်များကိုထည့်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျအရသာရလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အရည်မထားဘဲ။
သင်၏ပေါင်ကိုလျှော့ချရန်အနေဖြင့်ကဲ့သို့သောအခြားလေ့ကျင့်ခန်းများပေါ်တွင်လောင်းနိုင်သည် ပခုံးပေါ်တံတား။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ခြေထောက်များကိုကွေးခြင်း၊ သင်ရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းတို့ဖြင့်သင်၏ခြေထောက်များကိုလိပ်ထားရပါမည်။ သို့သော်၎င်းကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သငျသညျခြေဘဝါးနှင့်ပခုံး၏အစိတ်အပိုင်းများကထောက်ခံနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်၏လက်မောင်းကိုမြှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြေထောက်ပေါ်ခြေတင်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပိလတ်မင်း၌များသောအားဖြင့်ပြုလေ့ရှိသောကိုယ်ဟန်အနေအထားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်။
ခြေထောက်ဓာတ်လှေကားသည်အခြေခံအကျဆုံးနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခါလဲလျောင်း၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကျနော်တို့ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုမြှောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်ရင်မြေကြီးကိုထိစရာမလိုဘဲ၎င်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချမည်။ ဒီexercရိယာကိုလေ့ကျင့်ခန်းအပြင်, ငါတို့သည်လည်းဝမ်းဗိုက်နှင့်အတူတူပြုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာကျောက်တုံးတစ်တုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်ပစ်ပြီးပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြံဥာဏ်များအားလုံးကိုလိုက်နာလိုက်ရင်၊ ခြားနားချက်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » လေ့ကျင့် » ပါးလွှာသောခြေထောက်မှလေ့ကျင့်ခန်း